bollywood series – Categories – Alpha Premium
Mai: A Mother’s Rage (2022) ##unicode သားသမီးကိုဆုံးရူံးလိုကျရတဲ့ မိခငျတဈယောကျရဲ့ အမကျြဒေါသ ဘယျလောကျကွီးမားတယျ၊ နူးညံ့တဲ့မိခငျတဈယောကျကိုတောငျ ကွမျးတမျးတဲ့လူတဈယောကျဖွဈလာအောငျ ပွောငျးလဲနိုငျတယျဆိုတာ အခုတငျဆကျပေးလိုကျတဲ့ MAI seriesမှာ မွငျတှရေ့မှာပဲဖွဈလို့ လကျမလှတျတမျးကွညျ့သငျ့တဲ့ seriesကောငျးဖွဈလာမှာပါ Netflixကတငျဆကျလိုကျတဲ့ အခုစီးရီးမှာ မငျးသမီးကွီး Sakshi Tanwarက ပူဆှေးသောကရောကျနတေဲ့ မိခငျနရောကနေ ဇာတျကောငျနဲ့အလိုကျဖကျဆုံးသရုပျဆောငျထားပါတယျ ၂နှဈအရှယျမှာ အကျစီးဒငျ့ဖွဈခဲ့လို့ စကားမပွောနိုငျတော့တဲ့ သမီးလေးဆူပရီရာကို အမဖွေဈသူ ရှီလျက အခဈြပိုခဲ့ရပါတယျ သူ့သမီးရဲ့ လကျဟနျခွဟေနျနဲ့ပွောတဲ့ သင်ျကတေစကားကိုလညျး သူပဲနားအလညျနိုငျဆုံးဖွဈပွီး ဆူပရီရာရဲ့ ဟောပွောပှဲတှမှော ရှီလျက နောကျကလိုကျပွီး နောကျခံစကားပွောတဲ့လူလုပျခဲ့တာပေါ့ သမီးအကွောငျးကို သူအကုနျသိတယျလို့ ရှီလျက ထငျခဲ့ပမေယျ့ ရှီလျမသိခဲ့တဲ့ လြို့ဝှကျခကျြတဈခုက ဆူပရီရာကို သတျသှားခဲ့ပါတယျ ဆူပရီရာတဈယောကျ ရှီလျရဲ့ မကျြစိရှမှေ့ာတငျ ကားတိုကျခံရပွီးသဆေုံးသှားခဲ့တယျ ရှီလျဟာ သူ့သမီး ကားအကျစီးဒငျ့ဖွဈလို့သတောမဟုတျဘဲ တမငျသကျသကျ အသတျခံရတာကိုသိလိုကျရတဲ့အခါမှာ သူ့သမီးကိုသတျတဲ့လူတှကေို စုံစမျးပါတော့တယျ မိခငျတဈယောကျရဲ့ပူဆှေးမှု၊ သောက၊ အမကျြဒေါသတှကေို ဒီဇာတျလမျးတှဲမှာ စိတျလှုပျရှားမှုအပွညျ့နဲ့ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပဲဖွဈလို့ ကွညျ့ရူအားပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi သားသမီးကိုဆုံးရူံးလိုက်ရတဲ့ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ အမျက်ဒေါသ ဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်၊ နူးညံ့တဲ့မိခင်တစ်ယောက်ကိုတောင် ကြမ်းတမ်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင် ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုတာ အခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ MAI ...
Mai: A Mother’s Rage (2022)
Bang Baang (App member only) ##unicode ဒီတဈခေါကျမှာတော့ Bang Baang (Sound of Crimes) ဆိုတဲ့အိန်ဒိယမှုခငျးဝကျဘျစီးရီးလေးတဈခုကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ နာမညျကွီးအနုပညာရှငျမြားဖွဈကွတဲ့ Mr. Faisu , Ruhi Singh, Ashu Yadav တို့ကအဓိကပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါတယျ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ မီရာဟာရဲအရာရှိတဈယောကျဖွဈပွီးအီဒိုငျပူတျောဝငျမိသားစုရဲ့ခြှေးမဖွဈလာမယျ့သူလညျးဖွဈပါတယျ မီရာတဈယောကျစစေ့ပျပှဲနမှေ့ာတငျအမညျမသိအလောငျးတဈလောငျးပျေါလာတဲ့အတှကျမီရာတဈယောကျ အရေးပျေါသှားရောကျစဈဆေးရပါတော့တယျ အီဒိုငျပူတျောဝငျမိသားစုရဲ့မငျးသမီးရာမိုနာဟာလှနျခဲ့တဲ့ငါးနှဈလောကျကတညျးကပြောကျဆုံးတာဖွဈပွီး မီရာသှားရောကျစဈဆေးရတဲ့အမညျမသိအလောငျးကနရောမိုနာရဲ့လကျစှပျကိုတှရှေိ့ခဲ့ရပါတော့တယျ ဒါ့အပွငျအလောငျးနဲ့အတူရညျးစားဟောငျးရာဂူးကိုပေးထားတဲ့လညျစညျးပဝါကိုလညျးအတူတှရှေိ့ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ မီရာရဲ့ခဈြသူဟောငျးရာဂူးဟာအမှုရဲ့အဓိကသံသယရှိသူဖွဈလာပါတယျ ရာမိုနာသဆေုံးရခွငျးအဓိကတရားခံကတကယျပဲမီရာရဲ့ခဈြသူဟောငျးရာဂူးလား ရာမိုနာရဲ့သဆေုံးခွငျးနောကျကှယျမှာဘယျလိုလြှို့ဝှကျခကျြတှရှေိနတောလဲဆိုတာကို အပိုငျးတိုငျးဖျောထုတျရငျးစိတျဝငျစားဖှယျကွညျ့ရှုရမယျ့ဇာတျကားကောငျးတဈကားဖွဈပါတယျ ##zawgyi ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Bang Baang (Sound of Crimes) ဆိုတဲ့အိန္ဒိယမှုခင်းဝက်ဘ်စီးရီးလေးတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ Mr. Faisu , Ruhi Singh, Ashu Yadav တို့ကအဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ မီရာဟာရဲအရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအီဒိုင်ပူတော်ဝင်မိသားစုရဲ့ချွေးမဖြစ်လာမယ့်သူလည်းဖြစ်ပါတယ် မီရာတစ်ယောက်စေ့စပ်ပွဲနေ့မှာတင်အမည်မသိအလောင်းတစ်လောင်းပေါ်လာတဲ့အတွက်မီရာတစ်ယောက် အရေးပေါ်သွားရောက်စစ်ဆေးရပါတော့တယ် အီဒိုင်ပူတော်ဝင်မိသားစုရဲ့မင်းသမီးရာမိုနာဟာလွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်လောက်ကတည်းကပျောက်ဆုံးတာဖြစ်ပြီး မီရာသွားရောက်စစ်ဆေးရတဲ့အမည်မသိအလောင်းကနေရာမိုနာရဲ့လက်စွပ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတော့တယ် ဒါ့အပြင်အလောင်းနဲ့အတူရည်းစားဟောင်းရာဂူးကိုပေးထားတဲ့လည်စည်းပဝါကိုလည်းအတူတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ မီရာရဲ့ချစ်သူဟောင်းရာဂူးဟာအမှုရဲ့အဓိကသံသယရှိသူဖြစ်လာပါတယ် ရာမိုနာသေဆုံးရခြင်းအဓိကတရားခံကတကယ်ပဲမီရာရဲ့ချစ်သူဟောင်းရာဂူးလား ရာမိုနာရဲ့သေဆုံးခြင်းနောက်ကွယ်မှာဘယ်လိုလျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိနေတာလဲဆိုတာကို အပိုင်းတိုင်းဖော်ထုတ်ရင်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် Review – Phyu Sin File Size – 1GB,2GB Format…mp4 Quality : 720p WED-DL,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin & Hmue Encoded by Arrow ==================================================================== App ဒေါင်းရန် App Link မနျဘာဝငျလိုသူမြား viber ...
Jugaadistan (2022) Complete ##unicode ဒီတဈခေါကျမှာတော့ဇာတျလမျးဇာတျအိမျကောငျးကောငျးနဲ့စိတျဝငျစားဖှယျကွညျ့ရှုရမယျ့အိန်ဒိယဇာတျလမျးတှဲလေးတဈခုကိုရှေးခယျြပေးထားပါတယျ ဇာတျလမျးအကွောငျးအရာလေးကတော့ရူဟီဆာဒါဆိုတဲ့မိနျးကလေးဟာဆိုရငျစာတျောတဲ့ဆေးကြောငျးသူကောငျမလေးတဈယောကျပါ ပညာသငျဆုရနိုငျဖို့အတှကျကွိုးစားနတေဲ့သူဖွဈပွီး မိသားစုကခြို့တဲ့တဲ့အတှကျအလုပျလုပျရငျးကြောငျးတကျနရေတဲ့သူဖွဈပါတယျ တဈနလေ့ပျကီးဆိုတဲ့အတနျးထဲကကောငျလေးတဈယောကျကိုသဘောကရြာကနရေူဟီရဲ့ဘဝကအပွောငျးလဲကွီးပွောငျးလဲသှားပါတော့တယျ လပျကီးဟာဆိုရငျရူဟီနဲ့လုံးဝကိုဆနျ့ကငျြဘကျပါလူငယျဆနျဆနျပြျောပြျောနတေတျပွီးဘာကိုမှစိုးရိမျကွောငျ့ကွမရှိဘဲ လှတျလပျစှာနတေတျတဲ့ကောငျလေးတဈယောကျပါ တဈနမှေ့ာတော့လပျကီးဟာရူဟီကိုမထငျမှတျထားတဲ့ကိစ်စတဈခုကမျးလှမျးလာပါတယျ အဲ့တာကတော့ပွညျနယျအဆငျ့ဝငျခှငျ့စာမေးပှဲဖွတေဲ့သူတှေ စာမေးပှဲအောငျမွငျဖို့မသခြောတဲ့အခါ သူတို့အစားသှားဖွပေေးဖို့လူတှငှေားရမျးတဲ့စီးပှားရေးမှာအတူလုပျဖို့ရူဟီကိုကမျးလှမျးလာတာပါ ရှငျးရှငျးပွောရရငျတော့ပညာရေးနယျပယျမှာလိမျစားတာပေါ့ အစကတော့သိပျပွီးစိတျမပါပမေယျ့ ပိုကျဆံလိုနတောရော လပျကီးကိုသဘောကတြာရောကွောငျ့နောကျဆုံးမှာသဘောတူလိုကျပါတယျ ရူဟီဆာဒါတဈယောကျဘယျလောကျအထိဖုံးကှယျပွီးလိမျညာမှုတှကေိုလုပျနိုငျမလဲ ဒီနယျပယျမှာရောဘယျလိုလြှို့ဝှကျခကျြမကောငျးမှုတှရှေိနနေိုငျမလဲဆိုတာကိုတော့ဇာတျလမျးထဲမှာ ဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့ပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့်အိန္ဒိယဇာတ်လမ်းတွဲလေးတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပေးထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ရူဟီဆာဒါဆိုတဲ့မိန်းကလေးဟာဆိုရင်စာတော်တဲ့ဆေးကျောင်းသူကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါ ပညာသင်ဆုရနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့သူဖြစ်ပြီး မိသားစုကချို့တဲ့တဲ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရင်းကျောင်းတက်နေရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ် တစ်နေ့လပ်ကီးဆိုတဲ့အတန်းထဲကကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုသဘောကျရာကနေရူဟီရဲ့ဘဝကအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ် လပ်ကီးဟာဆိုရင်ရူဟီနဲ့လုံးဝကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပါလူငယ်ဆန်ဆန်ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီးဘာကိုမှစိုးရိမ်ကြောင့်ကြမရှိဘဲ လွတ်လပ်စွာနေတတ်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ တစ်နေ့မှာတော့လပ်ကီးဟာရူဟီကိုမထင်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကမ်းလှမ်းလာပါတယ် အဲ့တာကတော့ပြည်နယ်အဆင့်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေတဲ့သူတွေ စာမေးပွဲအောင်မြင်ဖို့မသေချာတဲ့အခါ သူတို့အစားသွားဖြေပေးဖို့လူတွေငှားရမ်းတဲ့စီးပွားရေးမှာအတူလုပ်ဖို့ရူဟီကိုကမ်းလှမ်းလာတာပါ ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ပညာရေးနယ်ပယ်မှာလိမ်စားတာပေါ့ အစကတော့သိပ်ပြီးစိတ်မပါပေမယ့် ပိုက်ဆံလိုနေတာရော လပ်ကီးကိုသဘောကျတာရောကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသဘောတူလိုက်ပါတယ် ရူဟီဆာဒါတစ်ယောက်ဘယ်လောက်အထိဖုံးကွယ်ပြီးလိမ်ညာမှုတွေကိုလုပ်နိုင်မလဲ ဒီနယ်ပယ်မှာရောဘယ်လိုလျှို့ဝှက်ချက်မကောင်းမှုတွေရှိနေနိုင်မလဲဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော် Review – Phyu Sin File Size – 600MB (per episode) Format…mp4 Quality :,1080p WED-DL Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hmue & Phyu Sin Encoded by Arrow ================================================================================================================= Episode 1 (600MB) 1080p Gdrive / Alphadrive Episode2(600MB) 1080p Gdrive / Alphadrive Episode3(600MB) 1080p Gdrive / Alphadrive Episode4(600MB) 1080p Gdrive / Alphadrive Episode5(600MB) 1080p Gdrive ...
Jugaadistan (2022) Complete
Rudra: The Edge Of Darkness (free ကွညျ့ခငျြတဲ့သူတှလေဲ app ကနကွေညျ့လို့ရပါတယျ) ##unicode "Rudra: The Edge of Darkness" ဆိုတဲ့အိန်ဒိယကားလေးကတော့ Psychological crime thriller အမြိုးအစားဖွဈပွီးတော့ Singham ကားနဲ့နာမညျကွီးခဲ့တဲ့မငျးသားကွီး Vishal Veeru Devgan က အဓိကပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါတယျ ဒီဇာတျလမျးထဲမှာဆိုရငျ ဒီစီပီရူဒရာဗီးဆငျးဂျဟာဆိုရငျထကျမွကျပွီးအဖှဲ့ကအားကိုးရတဲ့သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ မှနျဘိုငျးမွို့ကွီးထဲမှာဖွဈပကျြနတေဲ့ရာဇဝတျမှုတှကေိုကြှမျးကြှမျးကငျြကငျြနဲ့စုံစမျးဖျောထုတျပွီးတရားခံတှကေို ဖမျးဆီးပေးနတေဲ့ရဲတဈယောကျဖွဈပါတယျ ဒီဇာတျလမျးတှဲမှာဆိုရငျအပိုငျးတဈခုဆီမှာပျေါပေါကျလာတဲ့ပွဿနာတဈခုစီကို ရဲအရာရှိရူဒရာတဈယောကျဘယျလိုကြှမျးကြှမျးကငျြကငျြဖွရှေငျးသှားမလဲဆိုတာကို စိတျဝငျစားဖှယျကွညျ့ရှုရမယျ့ဇာတျကားလေးဖွဈပါတယျ မှုခငျးကားတှကေိုမှကွိုကျနှဈသကျတဲ့ပရိသတျကွီးတှအေတှကျလညျးတကယျကိုစိတျလှုပျရှားဖှယျ ကွညျ့ရှုရမယျ့ကားလေးဖွဈလို့လကျမလှတျတမျးအားပေးကွညျ့ရှုပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi "Rudra: The Edge of Darkness" ဆိုတဲ့အိန္ဒိယကားလေးကတော့ Psychological crime thriller အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့ Singham ကားနဲ့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့မင်းသားကြီး Vishal Veeru Devgan က အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာဆိုရင် ဒီစီပီရူဒရာဗီးဆင်းဂ်ဟာဆိုရင်ထက်မြက်ပြီးအဖွဲ့ကအားကိုးရတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် မွန်ဘိုင်းမြို့ကြီးထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးတရားခံတွေကို ဖမ်းဆီးပေးနေတဲ့ရဲတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာဆိုရင်အပိုင်းတစ်ခုဆီမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြဿနာတစ်ခုစီကို ရဲအရာရှိရူဒရာတစ်ယောက်ဘယ်လိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဖြေရှင်းသွားမလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့်ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ် မှုခင်းကားတွေကိုမှကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပရိသတ်ကြီးတွေအတွက်လည်းတကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ကြည့်ရှုရမယ့်ကားလေးဖြစ်လို့လက်မလွှတ်တမ်းအားပေးကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော် ==================================================================== App ဒေါင်းရန် App Link မနျဘာဝငျလိုသူမြား viber – 0969117714 ======================================================================================== Episode 1 (1080p) Gdrive / ...
Rocket Boys Season 1 Complete (App member only) ##unicode အိန်ဒိယနိုငျငံရဲ့သမိုငျးဝငျသိပ်ပံပညာရှငျကွီးနှဈယောကျဖွဈတဲ့ Dr Homi J Baba နဲ့ Dr Vikram Sarabai တို့ရဲ့ တီထှငျဖနျတီးမှုတှနေဲ့ဘဝအကွောငျးကို မှတျတမျးရုပျရှငျအဖွဈပွနျလညျရိုကျကူးထားတဲ့ `Rocket Boys´ ဆိုတဲ့ကားလေးကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ ဒီကားလေးထဲမှာဆိုရငျအိန်ဒိယသိပ်ပံပညာတိုးတကျလာပုံ သမိုငျးကွောငျးအပွငျနိုငျငံရေးအခွအေနတှေကေိုပါထငျဟပျပွသထားတာကိုတှရှေိ့ရမှာဖွဈပါတယျ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ဗဈကရမျဆာရာဘိုငျဟာကမျးဘရဈချြတက်ကသိုလျဆငျးသိပ်ပံပညာရှငျ တဈယောကျဖွဈပါတယျ နောကျပိုငျးမှာဟိုမီဘာဘာရှိတဲ့ IIScကြောငျးကိုရောကျလာခဲ့ပွီးသိပ်ပံပညာကိုရူးသှပျတဲ့ အကငျြ့ခငျြးတူတာကွောငျ့နှဈယောကျသားအမွနျပဲရငျးနှီးသှားကွပါတယျ နှဈယောကျသားအတူပေါငျးပွီး စမျးသပျမှုတှလေညျးပွုလုပျခဲ့ကွပါတယျ သူတို့နှဈယောကျပေါငျးပွီးအိန်ဒိယသိပ်ပံနယျပယျကို ဘယျလိုတိုးတကျအောငျလုပျခဲ့လဲ သူတို့ရဲ့တီထှငျမှုတှနေဲ့နိုငျငံကိုဘယျလိုအကြိုးပွုခဲ့လဲဆိုတာတှကေို ဇာတျကားထဲမှာဗဟုသုတရဖှယျတငျဆကျထားတာဖွဈလို့လကျမလှတျတမျးကွညျ့ရှုသငျ့တဲ့ ဇာတျကားကောငျးတဈကားဖွဈပါတယျ ##zawgyi အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းဝင်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Dr Homi J Baba နဲ့ Dr Vikram Sarabai တို့ရဲ့ တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေနဲ့ဘဝအကြောင်းကို မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အဖြစ်ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ `Rocket Boys´ ဆိုတဲ့ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီကားလေးထဲမှာဆိုရင်အိန္ဒိယသိပ္ပံပညာတိုးတက်လာပုံ သမိုင်းကြောင်းအပြင်နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုပါထင်ဟပ်ပြသထားတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ဗစ်ကရမ်ဆာရာဘိုင်ဟာကမ်းဘရစ်ခ်ျတက္ကသိုလ်ဆင်းသိပ္ပံပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် နောက်ပိုင်းမှာဟိုမီဘာဘာရှိတဲ့ IIScကျောင်းကိုရောက်လာခဲ့ပြီးသိပ္ပံပညာကိုရူးသွပ်တဲ့ အကျင့်ချင်းတူတာကြောင့်နှစ်ယောက်သားအမြန်ပဲရင်းနှီးသွားကြပါတယ် နှစ်ယောက်သားအတူပေါင်းပြီး စမ်းသပ်မှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးအိန္ဒိယသိပ္ပံနယ်ပယ်ကို ဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခဲ့လဲ သူတို့ရဲ့တီထွင်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်လိုအကျိုးပြုခဲ့လဲဆိုတာတွေကို ဇာတ်ကားထဲမှာဗဟုသုတရဖွယ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်လို့လက်မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုသင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် Review – Hmue File Size – 800MB (per episode) Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL Genre : Crime,Mystery,Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hmue & Phyu ...
Rocket Boys Season 1 Complete
The Great Indian Murder Season 1 Complete ##unicode "The Great Indian Murder" ဆိုတဲ့အိန်ဒိယစီးရီးလေးဟာဆိုရငျ စာရေးဆရာ Vikas Swarup ရဲ့ အရောငျးရဆုံးဝတ်ထုစာအုပျဖွဈတဲ့ "Six Suspects"ဆိုတဲ့ဝတ်တုကိုအခွခေံပွီးရိုကျကူးထားတာဖွဈပွီးတော့ ထိတျလနျ့သညျးဖိုမှုခငျးကားတှကေိုမှကွညျ့ခငျြတဲ့ပရိသတျတှအေတှကျကတော့ကှကျတိပဲဖွဈမှာပါ ဇာတျလမျးအကဉျြးလေးကိုနညျးနညျးပွောပွပါ့မယျ ဗဈကီရိုငျဟာဆိုရငျအသကျ ၃၀ နှဈလောကျရှိပွီဖွဈပွီးတော့ ကိုယျပိုငျကုမ်ပဏီကွီးတဈခုကိုတညျထောငျထားတဲ့သူလညျးဖွဈပါတယျ သူရဲ့မကောငျးတဲ့စာရိုကျကတော့သူ့စီးပှားရေးအကြိုးတှကျဆိုရငျကောငျးတာဆိုးတာဘာမဆိုလုပျတတျတဲ့ သူဖွဈပွီးအမွတျကိုသာကွညျ့တတျတဲ့သူဖွဈပါတယျ သူ့အဖပွေညျထဲရေးဝနျကွီးရဲ့အာဏာကွောငျ့လညျးထငျရဲစိုငျးနတေော့တာပေါ့ တဈနမှေ့ာတော့ဗဈကီဟာသူ့ကုမ်ပဏီပါတနာအတှကျပြျောတျောဆကျဖို့မိနျးကလေးနှဈယောကျကိုရှာပေးရငျး အဲ့ဒီမိနျးကလေးနှဈယောကျမတျောတဆသသှေားခဲ့ပါတယျ ဗဈကီဟာသူ့တပညျ့တှကေိုအလောငျးတှေ ကိုသှားပဈဖို့ပွောခဲ့ပမေယျ့ ရဲတှကေသူတို့ကိုဖမျးဆီးမိသှားပါတယျ ဒါပမေယျ့နိုငျငံရေးအာဏာရှိသူရဲ့ သားဖွဈသူပီပီအမှုကနလှေယျလှယျလေးရှောငျထှကျနိုငျခဲ့ပါတယျ ဒါ့အပွငျဗဈကီကသူ့အပွဈကို သူနောငျတမရဘဲအမှုကနလှေတျလာတဲ့အတှကျပါတီပှဲတောငျကငျြးပခဲ့ပါတယျ ဒါပမေယျ့မကောငျးတဲ့ သူတှရေဲ့သှားရာလမျးအတိုငျးဗဈကီတဈယောကျပါတီပှဲမှာသနေတျနဲ့ပဈသတျပွီးလုပျကွံခံခဲ့ရပါတယျ ဗဈကီရဲ့သဆေုံးမှုအတှကျရဲတှအေနနေဲ့သံသယရှိသူခွောကျဦးဖမျးဆီးခဲ့ပွီးသူတို့ခွောကျဦးထဲက ဘယျသူကတရားခံအစဈလဲဆိုတာတဈခနျးခငျြးဆကျစပျပွီးဖျောထုတျသှားမှာဖွဈပါတယျ အဲ့တော့ဗဈကီကိုလုပျကွံတဲ့သူဟာဘယျသူမြားဖွဈမလဲ ရဲတှဖေမျးဆီးရမိခဲ့တဲ့သံသယရှိသူခွောကျဦးထဲမှာတကယျ့တရားခံကပါလာနိုငျပါ့မလားဆိုတာ ကိုတော့ဇာတျလမျးထဲမှာဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့ပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi "The Great Indian Murder" ဆိုတဲ့အိန္ဒိယစီးရီးလေးဟာဆိုရင် စာရေးဆရာ Vikas Swarup ရဲ့ အရောင်းရဆုံးဝတ္ထုစာအုပ်ဖြစ်တဲ့ "Six Suspects"ဆိုတဲ့ဝတ္တုကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ ထိတ်လန့်သည်းဖိုမှုခင်းကားတွေကိုမှကြည့်ချင်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့ကွက်တိပဲဖြစ်မှာပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကိုနည်းနည်းပြောပြပါ့မယ် ဗစ်ကီရိုင်ဟာဆိုရင်အသက် ၃၀ နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့ ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုကိုတည်ထောင်ထားတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ် သူရဲ့မကောင်းတဲ့စာရိုက်ကတော့သူ့စီးပွားရေးအကျိုးတွက်ဆိုရင်ကောင်းတာဆိုးတာဘာမဆိုလုပ်တတ်တဲ့ သူဖြစ်ပြီးအမြတ်ကိုသာကြည့်တတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ် သူ့အဖေပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးရဲ့အာဏာကြောင့်လည်းထင်ရဲစိုင်းနေတော့တာပေါ့ တစ်နေ့မှာတော့ဗစ်ကီဟာသူ့ကုမ္ပဏီပါတနာအတွက်ပျော်တော်ဆက်ဖို့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုရှာပေးရင်း အဲ့ဒီမိန်းကလေးနှစ်ယောက်မတော်တဆသေသွားခဲ့ပါတယ် ဗစ်ကီဟာသူ့တပည့်တွေကိုအလောင်းတွေ ကိုသွားပစ်ဖို့ပြောခဲ့ပေမယ့် ရဲတွေကသူတို့ကိုဖမ်းဆီးမိသွားပါတယ် ဒါပေမယ့်နိုင်ငံရေးအာဏာရှိသူရဲ့ သားဖြစ်သူပီပီအမှုကနေလွယ်လွယ်လေးရှောင်ထွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ဒါ့အပြင်ဗစ်ကီကသူ့အပြစ်ကို သူနောင်တမရဘဲအမှုကနေလွတ်လာတဲ့အတွက်ပါတီပွဲတောင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့်မကောင်းတဲ့ သူတွေရဲ့သွားရာလမ်းအတိုင်းဗစ်ကီတစ်ယောက်ပါတီပွဲမှာသေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ပြီးလုပ်ကြံခံခဲ့ရပါတယ် ဗစ်ကီရဲ့သေဆုံးမှုအတွက်ရဲတွေအနေနဲ့သံသယရှိသူခြောက်ဦးဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးသူတို့ခြောက်ဦးထဲက ဘယ်သူကတရားခံအစစ်လဲဆိုတာတစ်ခန်းချင်းဆက်စပ်ပြီးဖော်ထုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဗစ်ကီကိုလုပ်ကြံတဲ့သူဟာဘယ်သူများဖြစ်မလဲ ရဲတွေဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့သံသယရှိသူခြောက်ဦးထဲမှာတကယ့်တရားခံကပါလာနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ ကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော် Review – Hmue File Size – 800MB (per episode) Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL Genre : Crime,Mystery,Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hmue & Phyu Sin Encoded by ...
The Great Indian Murder Season 1 Complete
Yeh Kaali Kaali Ankhein Season 1 Complete ##unicode နာမညျကွီးနိုငျငံရေးသမားသူဌေးတဈယောကျရဲ့သမီး ခဈြကွိုကျမှုကိုခံခဲ့ရတဲ့ ကောငျလေးတဈယောကျ သူ့ဘဝရဲ့ရညျမှနျးခကျြ အိပျမကျတှကေိုအဖကျြစီးခံလိုကျရတဲ့ဇာတျအိမျဇာတျကှကျမြိုးနဲ့ ဒီseriesကတော့ စိတျလှုပျရှားဖို့အပွညျ့နဲ့ကွညျ့ရူရမယျ့ဇာတျလမျးတှဲကောငျးပါပဲ imdb 7/10တောငျရထားပွီး လှညျ့ကှကျပေါငျးစုံနဲ့ ဇာတျသိမျးအထိကိုဆှဲချေါသှားမှာပါ ဗဈကရနျ့ဆိုတဲ့ကောငျလေးရဲ့ဘဝက ပူဗာဆိုတဲ့သူဌေးသမီးနဲ့တှရေ့ငျ အမွဲကံဆိုးခဲ့တာငယျငယျလေးကတညျးကပါ ပူဗာရဲ့အဖဆေီမှာ ဗဈကရနျ့အဖကေ စာရငျးကိုငျလုပျတယျ ပူဗာကမေးတယျ ဗဈကရနျ့ကို သူငယျခငျြးလုပျမလားတဲ့ အဲဒီအခြိနျကတညျးက ပူဗာကိုငွငျးခဲ့တဲ့ ဗဈကရနျ့ဟာ ပူဗာ ကြောငျးပွောငျးသှားတော့ သိပျကိုပြျောခဲ့တယျ သူတို့တှအေရှယျရောကျလာတဲ့အခြိနျမှာ ပူဗာက ဗဈကရနျ့ရဲ့ဘဝမှာ နောကျတဈကွိမျပွနျပျေါလာခဲ့ပါတယျ အဲဒီအခြိနျမှာ ဗဈကရနျ့က အငျဂငျြနီယာဘှဲ့ရဖွဈပွီးခဈြသူလညျးရှိနခေဲ့ပါပွီ ဒါပမေယျ့ သူ့ရဲ့ကံဆိုးမှုတှတေဈဖနျပွနျပျေါလာခဲ့တာပေါ့ ပူဗာက ဗဈကရနျ့ကိုကွိုကျနပွေီးလကျထပျခငျြနတေယျ ပူဗာကိုသိပျအလိုလိုကျတဲ့ သူ့အဖသေူဌေးကွီးနိုငျငံရေးသမားက ငှလေညျးပွညျ့စုံ အာဏာလညျးပွညျ့စုံဆိုတော့ ဗဈကရနျ့ရဲ့ဘဝကိုဘယျလိုဒုက်ခတှပေေးမလဲ သူ့အိပျမကျတှဘေယျလိုရိုကျခြိုးခံရမလဲ ဗဈကရနျ့ကရော ပူဗာနဲ့ သူ့အဖအေပျေါမှာ ဘယျလိုရနျငွိုးတှအေမုနျးတှဖွေဈလာမလဲဆိုတာ ဒီဇာတျလမျးတှဲမှာစိတျလှုပျရှားမှုအပွညျ့နဲ့ စောငျ့မြှျောအားပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi နာမည်ကြီးနိုင်ငံရေးသမားသူဌေးတစ်ယောက်ရဲ့သမီး ချစ်ကြိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် သူ့ဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက် အိပ်မက်တွေကိုအဖျက်စီးခံလိုက်ရတဲ့ဇာတ်အိမ်ဇာတ်ကွက်မျိုးနဲ့ ဒီseriesကတော့ စိတ်လှုပ်ရှားဖို့အပြည့်နဲ့ကြည့်ရူရမယ့်ဇာတ်လမ်းတွဲကောင်းပါပဲ imdb 7/10တောင်ရထားပြီး လှည့်ကွက်ပေါင်းစုံနဲ့ ဇာတ်သိမ်းအထိကိုဆွဲခေါ်သွားမှာပါ ဗစ်ကရန့်ဆိုတဲ့ကောင်လေးရဲ့ဘဝက ပူဗာဆိုတဲ့သူဌေးသမီးနဲ့တွေ့ရင် အမြဲကံဆိုးခဲ့တာငယ်ငယ်လေးကတည်းကပါ ပူဗာရဲ့အဖေဆီမှာ ဗစ်ကရန့်အဖေက စာရင်းကိုင်လုပ်တယ် ပူဗာကမေးတယ် ဗစ်ကရန့်ကို သူငယ်ချင်းလုပ်မလားတဲ့ အဲဒီအချိန်ကတည်းက ပူဗာကိုငြင်းခဲ့တဲ့ ဗစ်ကရန့်ဟာ ပူဗာ ကျောင်းပြောင်းသွားတော့ သိပ်ကိုပျော်ခဲ့တယ် သူတို့တွေအရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ ပူဗာက ဗစ်ကရန့်ရဲ့ဘဝမှာ နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ် အဲဒီအချိန်မှာ ဗစ်ကရန့်က အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရဖြစ်ပြီးချစ်သူလည်းရှိနေခဲ့ပါပြီ ဒါပေမယ့် ...
Human Season 1 Complete (App member only) ##unicode ဒီတဈခေါကျမှာတော့"Human" ဆိုတဲ့အိန်ဒိယ web series လေးတဈခုကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ ဇာတျလမျးအကွောငျးအရာလေးကတော့ဗာယူဆေးဝါးလုပျငနျးဟာဈေးကှကျထဲမှာနရောရဦးဆောငျနိုငျဖို့အတှကျ ဆေးဝါးသဈထုတျလုပျဖို့ကွိုးစားနကွေတာဖွဈပါတယျ သူတို့ရဲ့ဆေးဝါးအသဈကိုတိရစ်ဆာနျတှနေဲ့စမျးသပျပွီးတဲ့နောကျ လူတှနေဲ့စမျးသပျတဲ့အခါမှာပွဿနာရှိနပွေီး လူအသအေပြောကျရှိတာကိုလညျးတှခေဲ့ရပါတော့တယျ ဒါပမေယျ့ဆေးဝါးစမျးသပျဖို့အတှကျကုနျကငြှတှေနေဲ့အခြိနျတှကေိုအခညျြးနှီးအဖွဈမခံနိုငျတဲ့အတှကျ လူတှသေတေဲ့ကိစ်စတှကေိုဖုံးကှယျပွီးဆကျပွီးတော့စမျးသပျခဲ့ပါတော့တယျ နောကျပိုငျးမှာစမျးသပျခနျးထဲမှာတငျမဟုတျဘဲဆေးရုံကလူနာတှကေိုပါတိုးပွီးစမျးသပျပါတော့တယျ ဒီလိုနဲ့လူတှဟောတဈယောကျပွီးတဈယောကျဆေးဝါးအသဈရဲ့ဆိုးကြိုးကိုခံစားရပါတော့တယျ ဒီဆေးလောကလိမျလညျမှုကွီးဟာလညျးပိုပိုပွီးတော့ဆိုးလာပါတော့တယျ ဒီဖွဈရပျဆိုးကွီးကိုဘယျလိုမြိုးဖွရှေငျးသှားကွမလဲ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးတှအေမြားကွီးရှိနတေဲ့ဆေးဝါးသဈထုတျလုပျမှုကိုတားဆီးသှားနိုငျပါ့မလားဆိုတာကို စိတျဝငျစားဖှယျကွညျ့ရှုရမယျ့ဇာတျလမျးကောငျးလေးဖွဈပါတယျ ##zawgyi ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့"Human" ဆိုတဲ့အိန္ဒိယ web series လေးတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ဗာယူဆေးဝါးလုပ်ငန်းဟာဈေးကွက်ထဲမှာနေရာရဦးဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် ဆေးဝါးသစ်ထုတ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ် သူတို့ရဲ့ဆေးဝါးအသစ်ကိုတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့စမ်းသပ်ပြီးတဲ့နောက် လူတွေနဲ့စမ်းသပ်တဲ့အခါမှာပြဿနာရှိနေပြီး လူအသေအပျောက်ရှိတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတော့တယ် ဒါပေမယ့်ဆေးဝါးစမ်းသပ်ဖို့အတွက်ကုန်ကျငွေတွေနဲ့အချိန်တွေကိုအချည်းနှီးအဖြစ်မခံနိုင်တဲ့အတွက် လူတွေသေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဖုံးကွယ်ပြီးဆက်ပြီးတော့စမ်းသပ်ခဲ့ပါတော့တယ် နောက်ပိုင်းမှာစမ်းသပ်ခန်းထဲမှာတင်မဟုတ်ဘဲဆေးရုံကလူနာတွေကိုပါတိုးပြီးစမ်းသပ်ပါတော့တယ် ဒီလိုနဲ့လူတွေဟာတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်ဆေးဝါးအသစ်ရဲ့ဆိုးကျိုးကိုခံစားရပါတော့တယ် ဒီဆေးလောကလိမ်လည်မှုကြီးဟာလည်းပိုပိုပြီးတော့ဆိုးလာပါတော့တယ် ဒီဖြစ်ရပ်ဆိုးကြီးကိုဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းသွားကြမလဲ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးရှိနေတဲ့ဆေးဝါးသစ်ထုတ်လုပ်မှုကိုတားဆီးသွားနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် Review – Phyu Sin File Size – 600MB (per episode) Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL Genre : Mystery,Drama,Crime Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin Encoded by Arrow ==================================================================== App ဒေါငျးရန် App Link မနျဘာဝငျလိုသူမြား viber – 09691177142
Human Season 1 Complete
Parampara (2021) (App only) (free ကွညျ့ခငျြတဲ့သူတှလေဲ app ကနဝေငျကွညျ့လို့ရပါတယျ) ##unicode အိန်ဒိယဇာတျကွမျးကားတှကွေိုကျသူတှအေကွိုကျတှစေ့မေယျ့ "Parampara" ဆိုတဲ့ဇာတျလမျးတှဲလေးကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ ဇာတျလမျးအကဉျြးလေးကတော့ ဗီရာနိုငျဒူဟာပတျဝနျးကငျြမှာလူတိုငျးလေးစားခဈြခငျရတဲ့ခေါငျးဆောငျကောငျးတဈဦးဖွဈပါတယျ နိုငျငံရေးတှကေိုစိတျမဝငျစားပမေယျ့ဗီရာနိုငျဒူထောကျခံပေးလိုကျတဲ့လူတှဟော လှတျတျောအမတျလောငျးတှေ ဝနျကွီးခြုပျတှဖွေဈသှားတဲ့အထိကိုဗီရာနိုငျဒူရဲ့ အငျအားကကွီးပါတယျ လူတှရေဲ့အကြိုးအတှကျအမွဲတမျးတှေးပေးတတျတဲ့ ဗီရာနိုငျဒူမှာ သူ့ရဲ့အားကိုးရာလကျရုံးနှဈယောကျဖွဈတဲ့ မိုဟနျရာအိုနဲ့ နိုငျဒူဆိုပွီးသားနှဈယောကျရှိပါတယျ တဈရကျမှာတော့ဗီရာနိုငျဒူဟာလုပျကွံခံလိုကျရပါတယျ အားလုံးကလညျးဗီရာနိုငျဒူရဲ့နရောကိုဆကျခံဖို့အတှကျသားအကွီးလညျးဖွဈ ဗီရာနိုငျဒူလို စိတျကောငျးနှလုံးကောငျးလညျးရှိတဲ့မိုဟနျရာအိုကိုနောကျလာမယျ့ခေါငျးဆောငျအဖွဈတငျမွှောကျခငျြပါတယျ ဒါပမေယျ့ဖွဈခငျြတော့သားအငယျနိုငျဒူဟာမိုဟနျရာအိုကိုတိတျတိတျလေးမနာလိုနတေဲ့သူဖွဈပွီး သူ့အဖသေပွေီးတဲ့နောကျနိုငျငံရေး စီးပှားရေး လူမှုရေးအားလုံးမှာလကျဝါးကွီးအုပျလိုကျပါတယျ ဒါကိုမွငျလိုကျရတဲ့မိုဟနျရာအိုရဲ့သားဂိုပီဟာ သူ့ဦးလေးနိုငျဒူကိုငယျငယျလေးကတညျးကအငွှိုးထားပွီးလကျစားခခြေငျြနတေဲ့သူဖွဈပါတယျ ဒီလိုနဲ့အရှယျရောကျလာတဲ့အခြိနျမှာတော့ဂိုပီတဈယောကျ သူ့ဦးလေးနိုငျဒူကိုဆနျ့ကငျြဖို့အစှမျးကုနျကွိုးစားပါတော့တယျ ဂိုပီနဲ့နိုငျဒူရဲ့အငျအားခငျြးယှဉျတဲ့ပှဲမှာဘယျသူကအနိုငျရသှားမလဲ ဂိုပီတဈယောကျအငျအားခငျြးအသကျအရှယျခငျြးကှာခွားနတေဲ့နိုငျဒူကိုတကယျပဲ အနိုငျယူသှားနိုငျပါ့မလားဆိုတာကိုစိတျဝငျစားဖှယျကွညျ့ရှုရမယျ့ဇာတျလမျးကောငျးလေးဖွဈပါတယျ ။##zawgyi အိန္ဒိယဇာတ်ကြမ်းကားတွေကြိုက်သူတွေအကြိုက်တွေ့စေမယ့် "Parampara" ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ဗီရာနိုင်ဒူဟာပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတိုင်းလေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် နိုင်ငံရေးတွေကိုစိတ်မဝင်စားပေမယ့်ဗီရာနိုင်ဒူထောက်ခံပေးလိုက်တဲ့လူတွေဟာ လွှတ်တော်အမတ်လောင်းတွေ ဝန်ကြီးချုပ်တွေဖြစ်သွားတဲ့အထိကိုဗီရာနိုင်ဒူရဲ့ အင်အားကကြီးပါတယ် လူတွေရဲ့အကျိုးအတွက်အမြဲတမ်းတွေးပေးတတ်တဲ့ ဗီရာနိုင်ဒူမှာ သူ့ရဲ့အားကိုးရာလက်ရုံးနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မိုဟန်ရာအိုနဲ့ နိုင်ဒူဆိုပြီးသားနှစ်ယောက်ရှိပါတယ် တစ်ရက်မှာတော့ဗီရာနိုင်ဒူဟာလုပ်ကြံခံလိုက်ရပါတယ် အားလုံးကလည်းဗီရာနိုင်ဒူရဲ့နေရာကိုဆက်ခံဖို့အတွက်သားအကြီးလည်းဖြစ် ဗီရာနိုင်ဒူလို စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလည်းရှိတဲ့မိုဟန်ရာအိုကိုနောက်လာမယ့်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်ချင်ပါတယ် ဒါပေမယ့်ဖြစ်ချင်တော့သားအငယ်နိုင်ဒူဟာမိုဟန်ရာအိုကိုတိတ်တိတ်လေးမနာလိုနေတဲ့သူဖြစ်ပြီး သူ့အဖေသေပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး လူမှုရေးအားလုံးမှာလက်ဝါးကြီးအုပ်လိုက်ပါတယ် ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့မိုဟန်ရာအိုရဲ့သားဂိုပီဟာ သူ့ဦးလေးနိုင်ဒူကိုငယ်ငယ်လေးကတည်းကအငြှိုးထားပြီးလက်စားချေချင်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုနဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဂိုပီတစ်ယောက် သူ့ဦးလေးနိုင်ဒူကိုဆန့်ကျင်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါတော့တယ် ဂိုပီနဲ့နိုင်ဒူရဲ့အင်အားချင်းယှဉ်တဲ့ပွဲမှာဘယ်သူကအနိုင်ရသွားမလဲ ဂိုပီတစ်ယောက်အင်အားချင်းအသက်အရွယ်ချင်းကွာခြားနေတဲ့နိုင်ဒူကိုတကယ်ပဲ အနိုင်ယူသွားနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် Review – Hmue File Size – 700MB (per episode) Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL Genre : Crime,Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hmue & Phyu Sin Encoded by Arrow ==================================================================== App ဒေါငျးရန် App Link မနျဘာဝငျလိုသူမြား viber – 09691177142
The Whistleblower (2021) (App member only) ##unicode ဒီဇာတျလမျးတှဲကတော့ ၂၀၁၃ခုနှဈ အိန်ဒိယမှာအမှနျတကယျဖွဈခဲ့တဲ့ ဆေးကြောငျးဝငျခှငျ့လိမျလညျမှု အကွောငျးကိုအခွခေံရိုကျကူးထားတဲ့ ဖွဈရပျမှနျဇာတျလမျးတှဲဖွဈပါတယျ ဘယျလိုလိမျလညျမှုလဲဆိုတော့ စာမလုပျဘဲဆရာဝနျဖွဈခငျြလား ကွားပှဲစားတှကေ စာမေးပှဲစဈတှေ အိုငျဒီကတျအတုလုပျတဲ့လူတှေ ရဲတှနေဲ့ပေါငျးပွီး သူတို့နရောမှာ လူစားထိုးဖွခေိုငျးမယျ ဒါဆိုအောငျသှားပွီးဆရာဝနျဖွဈသှားရော ပွီးတော့ အဲဒီလူစားထိုးဖွပေေးတဲ့လူတှကေလညျး ဆရာဝနျတှပေါ အတျောလေးကိုအကငျြ့ပကျြခွစားခဲ့တဲ့ဖွဈရပျမှနျအကွောငျးအရာတှကေို ဒီဇာတျလမျးတှဲမှာ ဇာတျအိမျကောငျးကောငျးနဲ့တငျဆကျပေးထားတာဆိုတော့ ဇာတျသိမျးအထိဆကျတိုကျကွညျ့ပဈခငျြအောငျကိုဆှဲဆောငျသှားမယျ့စီးရီးပါပဲ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ ဒေါကျတာဆနျကဈရဲ့အဖနေဲ့အဘိုးဟာ နာမညျကွီးဆေးရုံအုပျ၊ ဆေးကြောငျးအုပျတှပေဲဖွဈပါတယျ ဆနျကဈက မကောငျးတဲ့အရာဆိုတာသိလညျး သူ့ကိုစိတျလှုပျရှားအောငျလုပျနိုငျရငျ သဘောကတြဲ့လူစားမြိုးပါ ဒါကွောငျ့ သူ့ကောငျမလေး ဒေါကျတာပရာဂယာရဲ့ညီမဖွဈသူ သူ့ခယျမနဲ့ဖောကျပွနျနခေဲ့တယျပေါ့ သူ့ခယျမက ဆေးကြောငျးဝငျခှငျ့စာမေးပှဲကိုကနြတော၃ခါလောကျရှိပါပွီ ဒီလိုနဲ့ ကွံရာမရတဲ့အဆုံး သူ ဆေးကြောငျးဝငျခှငျ့ရအောငျ လာဘျထိုးတဲ့နညျးလမျးနဲ့လုပျမယျဆိုရာက ဆနျကဈတဈယောကျ ပှဲစားဖွဈသူ ဒါဒါနဲ့တှဆေုံ့ခဲ့ပွီးမိတျဆှဖွေဈသှားခဲ့ပါတယျ ငှကွေောငျ့ လူစားထိုးဖွပေေးတာမဟုတျဘဲ သူမြားကိုလိမျရလို့ စိတျလှုပျရှားရလို့ဆေးကြောငျးဝငျခှငျ့ကို အစားထိုးဖွပေေးခဲ့တဲ့ ဆနျကဈ နောကျပိုငျးဘယျလိုပွဿနာတှကွေုံတှလေ့ာရမလဲ ဒီလိမျလညျမှုကွီးရဲ့အမှနျတရား ဘယျလိုပျေါပေါကျလာမှာလဲဆိုတာကို ဒီဇာတျလမျးတှဲမှာကွညျ့ရူအားပေးကွပါဦးရှငျ ##zawgyi ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကတော့ ၂၀၁၃ခုနှစ် အိန္ဒိယမှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆေးကျောင်းဝင်ခွင့်လိမ်လည်မှု အကြောင်းကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပါတယ် ဘယ်လိုလိမ်လည်မှုလဲဆိုတော့ စာမလုပ်ဘဲဆရာဝန်ဖြစ်ချင်လား ကြားပွဲစားတွေက စာမေးပွဲစစ်တွေ အိုင်ဒီကတ်အတုလုပ်တဲ့လူတွေ ရဲတွေနဲ့ပေါင်းပြီး သူတို့နေရာမှာ လူစားထိုးဖြေခိုင်းမယ် ဒါဆိုအောင်သွားပြီးဆရာဝန်ဖြစ်သွားရော ပြီးတော့ အဲဒီလူစားထိုးဖြေပေးတဲ့လူတွေကလည်း ဆရာဝန်တွေပါ အတော်လေးကိုအကျင့်ပျက်ခြစားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်အကြောင်းအရာတွေကို ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ဇာတ်အိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးထားတာဆိုတော့ ဇာတ်သိမ်းအထိဆက်တိုက်ကြည့်ပစ်ချင်အောင်ကိုဆွဲဆောင်သွားမယ့်စီးရီးပါပဲ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဒေါက်တာဆန်ကစ်ရဲ့အဖေနဲ့အဘိုးဟာ နာမည်ကြီးဆေးရုံအုပ်၊ ဆေးကျောင်းအုပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် ဆန်ကစ်က မကောင်းတဲ့အရာဆိုတာသိလည်း သူ့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားအောင်လုပ်နိုင်ရင် သဘောကျတဲ့လူစားမျိုးပါ ဒါကြောင့် သူ့ကောင်မလေး ဒေါက်တာပရာဂယာရဲ့ညီမဖြစ်သူ သူ့ခယ်မနဲ့ဖောက်ပြန်နေခဲ့တယ်ပေါ့ သူ့ခယ်မက ဆေးကျောင်းဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကိုကျနေတာ၃ခါလောက်ရှိပါပြီ ဒီလိုနဲ့ ...
Aranyak (App member only) ##unicode Netflix channel ကနတေငျဆကျထားတဲ့အိန်ဒိယမှုခငျး Thriller ကားလေးကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ ကွညျ့ရှုသူတှဆေီကနကေောငျးမှနျတဲ့မှတျခကျြတှရေထားတဲ့အပွငျဇာတျလမျးဇာတျအိမျခိုငျပွီး မွှုပျကှကျတှနေဲ့တကယျကိုစိတျဝငျစားဖို့ကောငျးအောငျတငျပွပေးထားနိုငျတဲ့ဇာတျလမျးကောငျးလေးဖွဈပါတယျ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ဆီရိုနာဆိုတဲ့ငွိမျးခမျြးတဲ့မွို့ငယျလေးမှာတဈရကျအရမျးကို အကဉျြးတနျတဲ့လူသတျမှုကွီးဖွဈသှားပါတယျ သဆေုံးသူဟာအသကျ ၁၉ နှဈအရှယျ ပွငျသဈမိနျးကလေးငယျလေးဖွဈပွီးတော့သဈပငျပျေါမှာကွိုးတနျးလနျးကွီးနဲ့တှရှေိ့ရတာဖွဈပါတယျ ဒီအမှုကွောငျ့ဆီရိုနာမွို့လေးရဲ့လှနျခဲ့တဲ့၁၉နှဈလောကျကလူတဈပိုငျးကြားတဈပိုငျးတိရစ်ဆာနျဟာ မိနျးကလေးငယျလေးတှကေိုလကွတျတဲ့နမှေ့ာဖမျးယူသတျဖွတျတယျဆိုတဲ့ဒဏ်ဍာရီဟောငျးတဈပုဒျက ပွနျပွီးအသကျဝငျလာခဲ့ပါတော့တယျ မွို့ခံလူတှကေတော့ကြားသဈလူသားဆိုတဲ့တိရစ်ဆာနျကွီးက သတျဖွတျတယျလို့ယုံကွညျထားပါတယျ ကြားသဈလူသားဆိုတဲ့ဒဏ်ဍာရီကအမှနျပဲလား ကှငျးဆကျလူသတျမှုတှရေဲ့နောကျကှယျကအမှနျတရားကဘာလဲဆိုတာကို တဈပိုငျးခငျြးစီကိုကွညျ့ရှုရငျးအဖွရှောကွရမယျ့ဇာတျလမျးကောငျးလေးဖွဈလို့ကွညျ့ရှုလိုကျကွပါဦးနျော ##zawgyi Netflix channel ကနေတင်ဆက်ထားတဲ့အိန္ဒိယမှုခင်း Thriller ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ကြည့်ရှုသူတွေဆီကနေကောင်းမွန်တဲ့မှတ်ချက်တွေရထားတဲ့အပြင်ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ခိုင်ပြီး မြှုပ်ကွက်တွေနဲ့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင်တင်ပြပေးထားနိုင်တဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ဆီရိုနာဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့မြို့ငယ်လေးမှာတစ်ရက်အရမ်းကို အကျဉ်းတန်တဲ့လူသတ်မှုကြီးဖြစ်သွားပါတယ် သေဆုံးသူဟာအသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် ပြင်သစ်မိန်းကလေးငယ်လေးဖြစ်ပြီးတော့သစ်ပင်ပေါ်မှာကြိုးတန်းလန်းကြီးနဲ့တွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ် ဒီအမှုကြောင့်ဆီရိုနာမြို့လေးရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့၁၉နှစ်လောက်ကလူတစ်ပိုင်းကျားတစ်ပိုင်းတိရစ္ဆာန်ဟာ မိန်းကလေးငယ်လေးတွေကိုလကြတ်တဲ့နေ့မှာဖမ်းယူသတ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဒဏ္ဍာရီဟောင်းတစ်ပုဒ်က ပြန်ပြီးအသက်ဝင်လာခဲ့ပါတော့တယ် မြို့ခံလူတွေကတော့ကျားသစ်လူသားဆိုတဲ့တိရစ္ဆာန်ကြီးက သတ်ဖြတ်တယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ် ကျားသစ်လူသားဆိုတဲ့ဒဏ္ဍာရီကအမှန်ပဲလား ကွင်းဆက်လူသတ်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကအမှန်တရားကဘာလဲဆိုတာကို တစ်ပိုင်းချင်းစီကိုကြည့်ရှုရင်းအဖြေရှာကြရမယ့်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးဖြစ်လို့ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် Review – Phyu Sin File Size – 500MB (per episodes) Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL Genre : Action Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin & hmue Encoded by Arrow ==================================================================== App ဒေါငျးရန် App Link မနျဘာဝငျလိုသူမြား viber – 09691177142
Hiccups & Hookups (2021) (App member only) ##unicode ဒီတဈခေါကျမှာတော့ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့ကွညျ့ကောငျးတဲ့အိန်ဒိယဇာတျလမျးတှဲလေးကို တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ ဗာဆူဒါနဲ့အာကေးလျဟာသိပျခဈြကွတဲ့မောငျနှမနှဈယောကျဖွဈပါတယျ ဗာဆူဒါဟာခငျပှနျးဖွဈသူဒရု့ဗျနဲ့ကှာရှငျးပွီးတဲ့နောကျမှာအာကေးလျနဲ့အတူပဲနထေိုငျပါတယျ ဆကျဆံရေးအသဈတဈခုကိုစခငျြနတေဲ့ဗာဆူဒါဟာမောငျဖွဈသူအာကေးလျဆီကနအေကွံဉာဏျတှယေူပွီးဒိတျလုပျဖို့ကွိုးစားပါတယျ အာကေးလျဟာလညျး dating app တဈခုကိုတညျထောငျထားတဲ့သူတဈယောကျဖွဈပွီး သူကလညျးကောငျမလေးတှနေဲ့ဒိတျလုပျဖို့ကွိုးစားနတေဲ့သူပါ သူတို့မောငျနှမနှဈယောကျတဈယောကျနဲ့တဈယောကျအကွံဉာဏျပေးရငျးသူတို့လိုခငျြတဲ့ ဆကျဆံရေးမြိုးတညျဆောကျနိုငျပါ့မလား ဘယျလိုအလှဲတှနေဲ့ဟာသတှဖွေဈဦးမလဲဆိုတာကိုဆကျလကျကွညျ့ရှုပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့ကြည့်ကောင်းတဲ့အိန္ဒိယဇာတ်လမ်းတွဲလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဗာဆူဒါနဲ့အာကေးလ်ဟာသိပ်ချစ်ကြတဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ဗာဆူဒါဟာခင်ပွန်းဖြစ်သူဒရု့ဗ်နဲ့ကွာရှင်းပြီးတဲ့နောက်မှာအာကေးလ်နဲ့အတူပဲနေထိုင်ပါတယ် ဆက်ဆံရေးအသစ်တစ်ခုကိုစချင်နေတဲ့ဗာဆူဒါဟာမောင်ဖြစ်သူအာကေးလ်ဆီကနေအကြံဉာဏ်တွေယူပြီးဒိတ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ် အာကေးလ်ဟာလည်း dating app တစ်ခုကိုတည်ထောင်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူကလည်းကောင်မလေးတွေနဲ့ဒိတ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူပါ သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အကြံဉာဏ်ပေးရင်းသူတို့လိုချင်တဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုးတည်ဆောက်နိုင်ပါ့မလား ဘယ်လိုအလွဲတွေနဲ့ဟာသတွေဖြစ်ဦးမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော် Review – Phyu Sin File Size – 500MB (per episode) Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL Genre : Drama,Romance Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin & Hmue Encoded by Arrow ================== ==================================================================== App ဒေါငျးရန် App Link မနျဘာဝငျလိုသူမြား viber – 09691177142
Hiccups & Hookups (2021)
Matsya Kaand Season 1 Complete (App member only) ##unicode ဒီတဈခေါကျမှာတော့အိန်ဒိယ Crime Thriller web series လေးတဈခုကိုရှေးခယျြပေးထားပါတယျ မကျစီရာတာဒါဟာမကောငျးတဲ့လူတှရေဲ့ခြောကျတှနျးမှုကွောငျ့ထောငျကခြဲ့ရတဲ့သူပါ ထောငျထဲမှာလညျးမသရေုံတမယျနှိပျစကျညှငျးပနျးခံခဲ့ရပွီး ထှကျပွေးဖို့အကွိမျကွိမျကွိုးစားခဲ့ပမေယျ့လညျးမအောငျမွငျခဲ့ပါဘူး သူဟာတဈခြိနျလုံးသူ့ကိုဒုက်ခပေးတဲ့သူတှကေိုလကျစားခဖြေို့စောငျ့နတေဲ့သူဖွဈပွီး တဈရကျမှာတော့သူ့ကိုကူညီပေးနိုငျတဲ့ပနျဒဈဂြီဆိုတဲ့လူကွီးနဲ့ထောငျထဲမှာတှဆေုံ့ခဲ့ပါတယျ ထိုလူကွီးဟာသူ့ကိုလိုအပျတဲ့ပညာတှအေရညျအခငျြးတှသေငျကွားပေးပွီးကြှမျးကငျြတဲ့လူလိမျတဈယောကျ ဖွဈအောငျဖနျတီးပေးခဲ့ပါတယျ မကျစီရာဟာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးတာဝနျအဖွဈပနျဒဈဂြီရဲ့ဘဝကိုဖကျြဆီးသှားခဲ့တဲ့ လောငျးကစားသမားဆူရီပိုငျဆိုငျသမြှကိုလိမျပွီးယူရမှာပါ ပနျဒဈဂြီဟာသူ့အတှကျလကျစားခရြေငျး မကျစီရာလကျစားခခြေငျြတဲ့ပနျးတိုငျကိုရောကျသှားနိုငျတယျလို့ဆိုပါတယျ မကျစီရာတဈယောကျသူ့ရဲ့လကျစားခတြေဲ့အကွံအစညျကွီးကို ဘယျလိုအကောငျအထညျဖျောမလဲ သူ့နောကျကိုလိုကျနတေဲ့လူဆိုးတှနေဲ့ ရဲတှလေကျထဲကနဘေယျလိုအကှကျကကြလြှညျ့ထှကျသှားမလဲဆိုတာကို တဈပိုငျးနဲ့တဈပိုငျးစိတျဝငျစားဖို့ကောငျးကောငျးကွညျ့ရှုရမယျ့ ဇာတျကားကောငျးတဈကားဖွဈလို့ ကွညျ့ရှုပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အိန္ဒိယ Crime Thriller web series လေးတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပေးထားပါတယ် မက်စီရာတာဒါဟာမကောင်းတဲ့လူတွေရဲ့ချောက်တွန်းမှုကြောင့်ထောင်ကျခဲ့ရတဲ့သူပါ ထောင်ထဲမှာလည်းမသေရုံတမယ်နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခံခဲ့ရပြီး ထွက်ပြေးဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်လည်းမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး သူဟာတစ်ချိန်လုံးသူ့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူတွေကိုလက်စားချေဖို့စောင့်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီး တစ်ရက်မှာတော့သူ့ကိုကူညီပေးနိုင်တဲ့ပန်ဒစ်ဂျီဆိုတဲ့လူကြီးနဲ့ထောင်ထဲမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် ထိုလူကြီးဟာသူ့ကိုလိုအပ်တဲ့ပညာတွေအရည်အချင်းတွေသင်ကြားပေးပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့လူလိမ်တစ်ယောက် ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ် မက်စီရာဟာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးတာဝန်အဖြစ်ပန်ဒစ်ဂျီရဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးသွားခဲ့တဲ့ လောင်းကစားသမားဆူရီပိုင်ဆိုင်သမျှကိုလိမ်ပြီးယူရမှာပါ ပန်ဒစ်ဂျီဟာသူ့အတွက်လက်စားချေရင်း မက်စီရာလက်စားချေချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ် မက်စီရာတစ်ယောက်သူ့ရဲ့လက်စားချေတဲ့အကြံအစည်ကြီးကို ဘယ်လိုအကောင်အထည်ဖော်မလဲ သူ့နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့လူဆိုးတွေနဲ့ ရဲတွေလက်ထဲကနေဘယ်လိုအကွက်ကျကျလှည့်ထွက်သွားမလဲဆိုတာကို တစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ပိုင်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းကောင်းကြည့်ရှုရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်လို့ ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော် Review – Hmue File Size – 800MB (per episode) Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL Genre : Action Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hmue & Phyu Sin Encoded by Arrow ==================================================================== App ဒေါငျးရန် App Link မနျဘာဝငျလိုသူမြား viber – 09691177142
Matsya Kaand Season 1 Complete
Special Ops 1.5: The Himmat Story (2021) (App member only) ##unicode ဒီဇာတျလမျးတှဲကတော့ action thrillerစီးရီးကောငျးဖွဈပွီး အကောငျးစားသရုပျဆောငျခကျြနဲ့ဇာတျလမျးဇာတျကှကျတှကွေောငျ့ ဇကာတငျဆု ၈နရောဇကာတငျဝငျပွီး ဆုသုံးဆုကိုသိမျးပိုကျထားနိုငျခဲ့တဲ့ဇာတျလမျးတှဲပါ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ ဟငျမကျဆငျးဂျဆိုတဲ့အရာရှိဟာ ရိုးသားရဲရငျ့တဲ့အရာရှိတဈယောကျဖွဈပွီး လိုအပျလာရငျ အထကျလူကွီးတှရေဲ့အမိနျ့ကိုဖီဆနျနိုငျတဲ့လူမြိုးပါ ၂၀၀၁ခုနှဈ အိန်ဒိယလှတျတျောအတိုကျခိုကျခံရမှုမှာ အကွမျးဖကျသမား၆ယောကျရှိတယျလို့ထငျခဲ့တဲ့ ဟငျမကျဆငျးဂျရဲ့ထငျမွငျခကျြကို အထကျလူကွီးတှကေလကျမခံခဲ့ပါဘူး လှတျတျောအတိုကျခိုကျခံရမှုဟာ ရိုးရိုးမဟုတျဘဲ နောကျကှယျက အကွမျးဖကျခေါငျးဆောငျရှိနခေဲ့ပါတယျ ဒါ့အပွငျ ထိပျတနျးအရာရှိတှကေို မိနျးမတှနေဲ့သှေးဆောငျမွူဆှယျပွီး သတငျးနှိုကျတဲ့အမှုတှနေဲ့ဆကျစပျလာတဲ့အခါ ထိုအမှုဟာ အရမျးကိုရူပျထှေးလာပါတယျ ဒီအမှုကို ဟငျမကျဆငျးဂျတဈယောကျ ဘယျလိုဖွရှေငျးမလဲဆိုတာ ဒီဇာတျလမျးတှဲမှာ ဇာတျလမျးလှညျ့ကှကျပေါငျးမြားစှာနဲ့ကွညျ့ရူရမှာဖွဈဖို့ အားပေးကွပါဦး ##zawgyi ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကတော့ action thrillerစီးရီးကောင်းဖြစ်ပြီး အကောင်းစားသရုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေကြောင့် ဇကာတင်ဆု ၈နေရာဇကာတင်ဝင်ပြီး ဆုသုံးဆုကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဟင်မက်ဆင်းဂ်ဆိုတဲ့အရာရှိဟာ ရိုးသားရဲရင့်တဲ့အရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်လာရင် အထက်လူကြီးတွေရဲ့အမိန့်ကိုဖီဆန်နိုင်တဲ့လူမျိုးပါ ၂၀၀၁ခုနှစ် အိန္ဒိယလွှတ်တော်အတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာ အကြမ်းဖက်သမား၆ယောက်ရှိတယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့ ဟင်မက်ဆင်းဂ်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကို အထက်လူကြီးတွေကလက်မခံခဲ့ပါဘူး လွှတ်တော်အတိုက်ခိုက်ခံရမှုဟာ ရိုးရိုးမဟုတ်ဘဲ နောက်ကွယ်က အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်ရှိနေခဲ့ပါတယ် ဒါ့အပြင် ထိပ်တန်းအရာရှိတွေကို မိန်းမတွေနဲ့သွေးဆောင်မြူဆွယ်ပြီး သတင်းနှိုက်တဲ့အမှုတွေနဲ့ဆက်စပ်လာတဲ့အခါ ထိုအမှုဟာ အရမ်းကိုရူပ်ထွေးလာပါတယ် ဒီအမှုကို ဟင်မက်ဆင်းဂ်တစ်ယောက် ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ဇာတ်လမ်းလှည့်ကွက်ပေါင်းများစွာနဲ့ကြည့်ရူရမှာဖြစ်ဖို့ အားပေးကြပါဦး Review – Hmue File Size – 800MB (per episode) Format…mp4 Quality : 1080p ...
Cartel Season 1 Complete (App member only) ##unicode ဒီဇာတျလမျးတှဲက rating 8/10ရရှိထားပွီး မှနျဘိုငျးမွို့ရဲ့ဂိုဏျးရနျပှဲတှအေကွောငျးတှကေိုရိုကျကူးပွထားတဲ့ အကျရှငျဒရာမာအိန်ဒိယဇာတျလမျးတှဲကောငျးဖွဈလို့ ကွညျ့လို့ကောငျးမှာတော့အသအေခြာပါပဲ မှနျဘိုငျးမွို့ရဲ့ လူမိုကျဂိုဏျးငါးဂိုဏျးထဲမှာ အငျအားအကွီးဆုံးဂိုဏျးဖွဈတဲ့အနျဂရီဂိုဏျးခေါငျးဆောငျ ရာနီမိုငျဟာ ဂိုဏျးတှကေို နယျမွမေကြျောရ စီးပှားရေးဝငျမရူပျရဆိုတဲ့စညျးမဉျြးတှနေဲ့ မှနျဘိုငျးမွို့မှာ ဂိုဏျးရနျပှဲတှမေရှိအောငျ အုပျခြုပျခဲ့ပါတယျ တဈနေ့ မှာတော့ ရာနီမိုငျ လုပျကွံခံလိုကျရပါတယျ ရာနီမိုငျရဲ့တူနှဈယောကျဖွဈသူနဲ့သားဖွဈသူဟာ အနျဂရီဂိုဏျးကိုဆကျလကျဦးဆောငျခဲ့ပွီး ရာနီမိုငျကိုလုပျကွံသတျဖွတျသူကို ဘယျဂိုဏျးကကွိုးကိုငျနလေဲဆိုပွီး သံသယဖွဈနခေဲ့ပါတယျ ဒီလိုနဲ့ သှေးကှဲလာတဲ့ဂိုဏျးတှကွေားမှာ နောကျထပျသတျဖွတျမှုတှေ ပွဿနာတှဖွေဈလာခဲ့ပွီး ဂိုဏျးရနျပှဲကွီးဖွဈလာဖို့ ရနျပှဲလေးတှကေနအေစပြိုးနခေဲ့ပါတယျ ဇာတျလမျးလှညျ့ကှကျတှအေပွညျ့နဲ့ ဒီဇာတျလမျးတှဲက ကွညျ့ရူသူကို စိတျလှုပျရှားမှုအပွညျ့ပေးနိုငျမှာဖွဈလို့ Alpha channelပရိသတျကွီးအတှကျ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ ##zawgyi ဒီဇာတ်လမ်းတွဲက rating 8/10ရရှိထားပြီး မွန်ဘိုင်းမြို့ရဲ့ဂိုဏ်းရန်ပွဲတွေအကြောင်းတွေကိုရိုက်ကူးပြထားတဲ့ အက်ရှင်ဒရာမာအိန္ဒိယဇာတ်လမ်းတွဲကောင်းဖြစ်လို့ ကြည့်လို့ကောင်းမှာတော့အသေအချာပါပဲ မွန်ဘိုင်းမြို့ရဲ့ လူမိုက်ဂိုဏ်းငါးဂိုဏ်းထဲမှာ အင်အားအကြီးဆုံးဂိုဏ်းဖြစ်တဲ့အန်ဂရီဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် ရာနီမိုင်ဟာ ဂိုဏ်းတွေကို နယ်မြေမကျော်ရ စီးပွားရေးဝင်မရူပ်ရဆိုတဲ့စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ မွန်ဘိုင်းမြို့မှာ ဂိုဏ်းရန်ပွဲတွေမရှိအောင် အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ် တစ်နေ့ မှာတော့ ရာနီမိုင် လုပ်ကြံခံလိုက်ရပါတယ် ရာနီမိုင်ရဲ့တူနှစ်ယောက်ဖြစ်သူနဲ့သားဖြစ်သူဟာ အန်ဂရီဂိုဏ်းကိုဆက်လက်ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး ရာနီမိုင်ကိုလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်သူကို ဘယ်ဂိုဏ်းကကြိုးကိုင်နေလဲဆိုပြီး သံသယဖြစ်နေခဲ့ပါတယ် ဒီလိုနဲ့ သွေးကွဲလာတဲ့ဂိုဏ်းတွေကြားမှာ နောက်ထပ်သတ်ဖြတ်မှုတွေ ပြဿနာတွေဖြစ်လာခဲ့ပြီး ဂိုဏ်းရန်ပွဲကြီးဖြစ်လာဖို့ ရန်ပွဲလေးတွေကနေအစပျိုးနေခဲ့ပါတယ် ဇာတ်လမ်းလှည့်ကွက်တွေအပြည့်နဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲက ကြည့်ရူသူကို စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြည့်ပေးနိုင်မှာဖြစ်လို့ Alpha channelပရိသတ်ကြီးအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Review – ...
Cartel Season 1 Complete
Crime Stories: India Detectives ##unicode အခုတငျဆကျပေးလိုကျတဲ့စီးရီးမှာတော့ အိန်ဒိယနိုငျငံ Bangaloreမွို့မှာဖွဈပှားခဲ့တဲ့ ပွဈမှုတှအေကွောငျးတှကေို တဈပိုငျးခငျြးစီမှာဖျောပွထားတာကိုကွညျ့ရူရမှာပါ အိန်ဒိယစုံထောကျတှရေဲ့အမှုဖွရှေငျးပုံ ဘယျလိုရူ့ထောငျ့ကနေ အမှုတှကေိုစဉျးစားသလဲ ကိုယျ့အလုပျပျေါမှာဘယျလောကျစိတျနှဈပွီးလုပျကွလဲဆိုတာကို documentaryဆနျဆနျရိုကျကူးထားတဲ့ စီးရီးပဲဖွဈပါတယျ ဒီစီးရီးမှာဆိုရငျ အပိုငျး၎ပိုငျးပါဝငျပွီး တဈပိုငျးခငျြးစီမှာ အမှုတဈခုကိုဖျောထုတျသှားမှာပါ အမှုလေးခုရဲ့နာမညျကတော့ အသတျခံလိုကျရတဲ့မိခငျဖွဈသူ၊ ဂုနျနီအိတျထဲကခန်ဓာကိုယျအလောငျး၊ အကာအကှယျလိုအပျမှုနှငျ့ အခိုးခံလိုကျရသောကလေးပဲဖွဈပါတယျ အမှုနာမညျတှကေထူးဆနျးသလို အမှုတှကေလညျး လှညျ့ကှကျအပွညျ့နဲ့စိတျဝငျစားစရာပဲဖွဈလို့ အားပေးမှုကောငျးကောငျးလညျးရရှိထားပါတယျ ဒီအမှုတှအေကွောငျး စီးရီးထဲမှာ အားပေးကွညျ့ရူပေးကွပါဦးနျော ##zawgyi အခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့စီးရီးမှာတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ Bangaloreမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုတွေအကြောင်းတွေကို တစ်ပိုင်းချင်းစီမှာဖော်ပြထားတာကိုကြည့်ရူရမှာပါ အိန္ဒိယစုံထောက်တွေရဲ့အမှုဖြေရှင်းပုံ ဘယ်လိုရူ့ထောင့်ကနေ အမှုတွေကိုစဉ်းစားသလဲ ကိုယ့်အလုပ်ပေါ်မှာဘယ်လောက်စိတ်နှစ်ပြီးလုပ်ကြလဲဆိုတာကို documentaryဆန်ဆန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ စီးရီးပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီစီးရီးမှာဆိုရင် အပိုင်း၎ပိုင်းပါဝင်ပြီး တစ်ပိုင်းချင်းစီမှာ အမှုတစ်ခုကိုဖော်ထုတ်သွားမှာပါ အမှုလေးခုရဲ့နာမည်ကတော့ အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့မိခင်ဖြစ်သူ၊ ဂုန်နီအိတ်ထဲကခန္ဓာကိုယ်အလောင်း၊ အကာအကွယ်လိုအပ်မှုနှင့် အခိုးခံလိုက်ရသောကလေးပဲဖြစ်ပါတယ် အမှုနာမည်တွေကထူးဆန်းသလို အမှုတွေကလည်း လှည့်ကွက်အပြည့်နဲ့စိတ်ဝင်စားစရာပဲဖြစ်လို့ အားပေးမှုကောင်းကောင်းလည်းရရှိထားပါတယ် ဒီအမှုတွေအကြောင်း စီးရီးထဲမှာ အားပေးကြည့်ရူပေးကြပါဦးနော် ========================================================================== Episode 1 (700MB) 1080p Mediafire / Alphadrive / Telegram Episode2(700MB) 1080p Mediafire / Alphadrive / Telegram Episode3(700MB) 1080p ...
Mumbai Diaries 26/11 (2021) ##unicode ဒီတဈခေါကျမှာတော့ ၂၀၀၈ ခုနှဈမှနျဘိုငျးတိုကျခိုကျမှုကိုအခွခေံပွီးရိုကျကူးထားတဲ့ဖွဈရပျမှနျဇာတျကားလေးကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ ၂၀၀၈ ခုနှဈမှနျဘိုငျးတိုကျခိုကျမှုအကွောငျးကိုရိုကျကူးထားတဲ့ Hotel Mumbai(2018) နဲ့ The Attacks of 26/11 ဆိုတဲ့ဇာတျကားတှကေလညျးအောငျမွငျခဲ့တဲ့ဇာတျကားကောငျးတှပေဲဖွဈပါတယျ ထိုကားတှမှောဆိုရငျအကွမျးဖကျတှကေိုနှိမျနငျးခဲ့တဲရဲတှေ ပွညျသူတှကေိုကာကှယျခဲ့တဲ့ဟိုတယျဝနျထမျးတှအေကွောငျးကို ရိုကျကူးတငျပွထားပါတယျဒါပမေယျ့ဒီ Mumbai Diaries 26/11 ဆိုတဲ့ကားထဲမှာတော့တိုကျခိုကျမှုကွောငျ့ ထိခိုကျဒဏျရာရရှိခဲ့တဲ့ပွညျသူတှရေဲအရာရှိတှကေို ကွိုးစားပမျးစားနဲ့အသကျကယျခဲ့ကွတဲ့ဆရာဝနျတှအေကွောငျးကိုကွညျ့ရှုကွရမှာဖွဈပါတယျ ဆရာဝနျတှပေငျပငျပနျးပနျးနဲ့လူနာတှအေမြားကွီးကိုဘယျလိုကုသခဲ့လဲ တာဝနျရှိသူတှကေရောအကွမျးဖကျတှကေိုဘယျလိုမြိုးနှိမျနငျးဖို့ကွိုးစားခဲ့ကွတယျဆိုတာကို စိတျဝငျစားဖှယျကွညျ့ရှုရမယျ့ဇာတျကားကောငျးလေးဖွဈပါတယျ ##zawgyi ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မွန်ဘိုင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မွန်ဘိုင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ Hotel Mumbai(2018) နဲ့ The Attacks of 26/11 ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားတွေကလည်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ် ထိုကားတွေမှာဆိုရင်အကြမ်းဖက်တွေကိုနှိမ်နင်းခဲ့တဲရဲတွေ ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ခဲ့တဲ့ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေအကြောင်းကို ရိုက်ကူးတင်ပြထားပါတယ်ဒါပေမယ့်ဒီ Mumbai Diaries 26/11 ဆိုတဲ့ကားထဲမှာတော့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲအရာရှိတွေကို ကြိုးစားပမ်းစားနဲ့အသက်ကယ်ခဲ့ကြတဲ့ဆရာဝန်တွေအကြောင်းကိုကြည့်ရှုကြရမှာဖြစ်ပါတယ် ဆရာဝန်တွေပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့လူနာတွေအများကြီးကိုဘယ်လိုကုသခဲ့လဲ တာဝန်ရှိသူတွေကရောအကြမ်းဖက်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးနှိမ်နင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ့်ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် Review – Hmue File Size – 500MB (per episode) Format…mp4 Quality : 1080p HD Genre : Drama, Mystery Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Hmue & Phyu Sin Encoded by Arrow ============================================================================== Episode 1 (500MB) ...
City of Dreams Season2(App Premium only) ##unicode City of Dreams Season 1 မှာပူနီမာဂိုကျကှာဟာ သူ့အဖအောမရောရာအိုဂိုကျကှာရဲ့ ဆကျခံသူဖွဈတဲ့မောငျဖွဈသူ အာရှဈကိုသတျပွီး နရောဝငျယူခဲ့ပါတယျ ဒီအပိုငျးမှာတော့အာမရောဟာသမီးဖွဈသူကိုအလှနျနာကညျြးသှားပွီးလကျစားခဖြေို့ တိတျတဆိတျကွံစညျနပေါတယျ ဂိုကျကှာမိသားစုအတှငျးဘယျလိုအာဏာအပွောငျးအလဲတှေ ဖွဈလာဦးမလဲ အဖနေဲ့သမီးကွားယှဉျပွိုငျမှုတှေ ကွောငျ့ ဘယျသူ့ဘဝတှပေကျြစီးရဦးမလဲ ဘယျသူ့အသကျတှစေတေးရဦးမှာလဲဆိုတာကိုတော့ဇာတျလမျးထဲမှာဆကျလကျကွညျ့ရှုလိုကျကွပါဦးနျော အိန်ဒိယနိုငျငံရဲ့နိုငျငံရေးရှုပျထှေးမှုတှနေဲ့ လှညျ့ကှကျတှကေိုတဈဝကွီးကွညျ့ရှုရမယျ့ဇာတျကားကောငျးတဈကားဖွဈပါတယျ ##zawgyi City of Dreams Season 1 မှာပူနီမာဂိုက်ကွာဟာ သူ့အဖေအာမေရာရာအိုဂိုက်ကွာရဲ့ ဆက်ခံသူဖြစ်တဲ့မောင်ဖြစ်သူ အာရှစ်ကိုသတ်ပြီး နေရာဝင်ယူခဲ့ပါတယ် ဒီအပိုင်းမှာတော့အာမေရာဟာသမီးဖြစ်သူကိုအလွန်နာကျည်းသွားပြီးလက်စားချေဖို့ တိတ်တဆိတ်ကြံစည်နေပါတယ် ဂိုက်ကွာမိသားစုအတွင်းဘယ်လိုအာဏာအပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာဦးမလဲ အဖေနဲ့သမီးကြားယှဉ်ပြိုင်မှုတွေ ကြောင့် ဘယ်သူ့ဘဝတွေပျက်စီးရဦးမလဲ ဘယ်သူ့အသက်တွေစတေးရဦးမှာလဲဆိုတာကိုတော့ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော် အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးရှုပ်ထွေးမှုတွေနဲ့ လှည့်ကွက်တွေကိုတစ်ဝကြီးကြည့်ရှုရမယ့်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် Review – Phyu Sin File Size – 600MB (per episode) Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL Genre : Action,Crime Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Phyu Sin & Hmue Encoded by Arrow ==================================================================== App ဒေါငျးရန် App Link မနျဘာဝငျလိုသူမြား viber – 09691177142
The Empire (2021) ##unicode အခုတငျဆကျပေးလိုကျတဲ့စီးရီးကတော့ အိန်ဒိယသမိုငျးစိတျကူးယဉျဝတ်တုကိုရိုကျကူးထားတဲ့ အသဈထှကျစီးရီးကောငျးပဲဖွဈပါတယျ Mughal အငျပါယာရဲ့အတတျအကဖြွဈစဉျတှေ အာဏာလုယူမှု တိုကျပှဲတှအေကွောငျးကွညျ့ရူရမှာပါ ခမညျးတျောဘုရငျကွီး ရုတျတရကျသဆေုံးသှားခဲ့တာကွောငျ့ တိုငျးပွညျရဲ့ခွိမျးခွောကျမှုအန်တရာယျတှကွေား အသကျ၁၄နှဈအရှယျမှာ မငျးသားငယျ ဘာဘာဟာ ဘုရငျဖွဈလာခဲ့ပါတယျ သူတို့တိုငျးပွညျကိုခွိမျးခွောကျနယျခြဲ့ခငျြနတေဲ့ ရကျစကျတဲ့ဘုရငျ ရှဘေားနီကနျနဲ့ ဘုရငျငယျ ဘာဘာတို့ရဲ့အားပွိုငျမှု တိုကျပှဲတှကေို ဒီစီးရီးမှာမွငျတှရေ့မှာပဲဖွဈပါတယျ ငယျငယျရှယျရှယျမှာ ဘုရငျဖွဈလာခဲ့တဲ့အတှကျ ခကျခဲကွမျးတမျးပွီး အပွောငျးအလဲမြားတဲ့ ဘုရငျဘာဘာရဲ့ဘဝဇာတျကွောငျးဘယျလိုဆကျဖွဈမလဲ အိန်ဒိယမွောကျပိုငျးကိုသိမျးပိုကျခငျြတဲ့ သူ့အိပျမကျကို အကောငျအထညျဖျောနိုငျမလားဆိုတာကွညျ့ရူရမယျ့ စီးရီးကောငျးဖွဈလို့ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ ##zawgyi အခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့စီးရီးကတော့ အိန္ဒိယသမိုင်းစိတ်ကူးယဉ်ဝတ္တုကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ အသစ်ထွက်စီးရီးကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Mughal အင်ပါယာရဲ့အတတ်အကျဖြစ်စဉ်တွေ အာဏာလုယူမှု တိုက်ပွဲတွေအကြောင်းကြည့်ရူရမှာပါ ခမည်းတော်ဘုရင်ကြီး ရုတ်တရက်သေဆုံးသွားခဲ့တာကြောင့် တိုင်းပြည်ရဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုအန္တရာယ်တွေကြား အသက်၁၄နှစ်အရွယ်မှာ မင်းသားငယ် ဘာဘာဟာ ဘုရင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် သူတို့တိုင်းပြည်ကိုခြိမ်းခြောက်နယ်ချဲ့ချင်နေတဲ့ ရက်စက်တဲ့ဘုရင် ရှေဘားနီကန်နဲ့ ဘုရင်ငယ် ဘာဘာတို့ရဲ့အားပြိုင်မှု တိုက်ပွဲတွေကို ဒီစီးရီးမှာမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မှာ ဘုရင်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အတွက် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပြီး အပြောင်းအလဲများတဲ့ ဘုရင်ဘာဘာရဲ့ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲ အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းကိုသိမ်းပိုက်ချင်တဲ့ သူ့အိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မလားဆိုတာကြည့်ရူရမယ့် စီးရီးကောင်းဖြစ်လို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Review – Hmue File Size – 800MB (per episode) Format…mp4 Quality : 1080p WED-DL Genre : Drama, Action ...